यौन/स्वास्थ्य Archives - Page 86 of 87 - inaruwaonline.com
काठमाडौं । हाम्रो शरीरको बिभिन्न भागमा रहेको कोठीको बारेमा छुट्टाछुट्टै धारणा रहेको छ भने अन्धबिश्वास पनि रहँदै आएको छ । यदि गर्भवती महिलाले बच्चाको जन्मपूर्व केही डरलाग्दो घटना वा केही उत्तेजक घटनाको सामना गर्नुपर्यो भने बच्चाको शरीरमा एउटा कोठी आउने गर्छ भन्ने अन्धविश्वास रहि आएको छ । त्यही भएर कोठी कस्तो प्रकारको हुन्छ भन्ने कुराको निर्धारण पनि आमा डराउने वा उत्तेजित हुने कुराले नै निर्ध...
सामान्यतया छिटो–छिटो खाँदा, तातो खानासँग चिसो हल्का पेय पदार्थहरु लिंदा, धेरै पिरो वा मसलादार खानेकुराहरु खाँदा, जोडले हाँस्दा र अल्कोहल धेरै पिउँदा बाडुली लाग्ने गर्छ । हाम्रो छाती र पेटलाई छुट्याउने भागमा एउटा पातलो मासुको झिल्ली हुन्छ । हामीले सास लिंदा त्यो फैलिन्छ र सास फेरेपछि पहिलेकै अवस्थामाखुम्चन्छ । यसक्रममा त्यस झिल्लीले हाम्रो फोक्सोलाई फैलन र खुम्चिन मद्दत गर्छ । त्यस झिल्लीलाई...
बिहान सबेरै उठ्नु राम्रो बानी हो। सबेरै उठेपछि योग तथा शारीरिक व्यायाम गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। बेलुकी ढिला सुतेर बिहान चाँडै उठ्दा पनि आलस्य हुन्छ। त्यसैले बेलुका पनि चाँडै सुत्ने र बिहान चाँडै उठ्ने बानी बसाल्नुपर्छ । बिहान उठेर व्यायाम नगर्नु, चिया–कफी सेवन गर्नु, तथा ब्रेकफास्ट नखानु हानिकारक हुन्छ। बिहान चाँडै उठ्नु आफ्नो बिहानी राम्रो बनाउने हो भने बिहान सबेरै उठ्नुपर्छ । अफिस जान...
देवानगञ्जमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न
भगवती मा. वि. मा दिवा खाजाबारे सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया सम्पन्न